Raha araka ny fampitam-baovao marim-pototra avy amina tompon’andraikitra iray dia mody notsabotsaboin’ireo misandoka ho dokotera nandritra ny efa-bolana ny mason’io zaza io. Sady nakany vola ireo ray aman-drenin’ilay zaza nandritra izay no nampividianany fanafody tsy mifanaraka amin’ilay aretina akory. Jamba tanteraka ilay zaza vokatr’izany ka tsy mahita na inona na inona intsony. Tsy hipetra-potsiny moa ny holafitry ny mpitsabo manoloana ny tranga tahaka itony fa tsy maintsy handray fepetra. Lohalaharana amin’izany ny fanaovana fanadihadiana mikasika ireo olona fositra hahafahana manasazy azy ireny. Nomarihin’izy ireo manokana mantsy fa olona nahazo fiofanana tamin’ny resaka fitsaboana ihany no tokony hiandraikitra ny fahasalamam-bahoaka fa tsy izay rehetra te-hanao izany asa izany. Faritra telo ankehitriny no tena ahitana ireo olona misandoka ho dokotera dia ny ao Fianarantsoa, Faritra Boeny ary ny ao SAVA, hoy hatrany ny loharanom-baovao.